को बन्छ अब कानून मन्त्री ? राणालार्इ पराजित गर्ने रानाको सम्भावना प्रबल - Deshko News Deshko News को बन्छ अब कानून मन्त्री ? राणालार्इ पराजित गर्ने रानाको सम्भावना प्रबल - Deshko News
को बन्छ अब कानून मन्त्री ? राणालार्इ पराजित गर्ने रानाको सम्भावना प्रबल
महिलाको चरित्र हत्या हुने गरि अभिव्यक्ति दिएपछि आलोचनाको पात्र बनेका कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएसंगै अबको कानून मन्त्री को बन्छ भन्ने चर्चाको विषय बनेको छ ।
यही चर्चाकाबीच कानून मन्त्री बन्न लायक र योग्य व्यक्तिको खाजी हुन थालेको छ । आफूलाई कानून मन्त्री बन्ने योग्य देख्ने नेकपाका नेताहरु मन्त्रीका लागि लबिङ गर्न थालिसकेका छन् ।
सरकार गठन हुने बेला तत्कालिन नेकपा एमालेको भागमा परेको कानून मन्त्रालय अहिले पनि सोहीअनुसार अर्थात त्यही खेमाबाट आउने सम्भावना नै देखिन्छ ।
अब नेकपाबाट को मन्त्री बन्न योग्य छ र कसको चर्चा छ भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ । यही चर्चाकाबीच प्रदेश नम्बर ७ को कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद नारदमूनि राना पनि देखिएका छन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणालाई पराजित गर्दै मन्त्रीका लागि दाबेदार बनेका राना अहिले कानून मन्त्रीका प्रमुख दाबेदार मानिएका छन् । बीएलसम्मको अध्ययन र दुई वर्ष अधिवक्ता भएर काम गरिसकेका राना कानून मन्त्रीका लागि योग्य मानिएका छन् ।
आरजू राणालाई पराजित गरे लगत्तै उनी त्यतिबेलै कानून मन्त्री बन्ने आँकलन गरिएको थियो । तर, पछि त्यसले सार्थकता पाउन सकेन ।
अहिले कानून मन्त्रीको राजीनामासंगै उनको सम्भावना बलियो देखिएको पार्टी स्रोतले बताएको छ ।
यसका लागि पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहसंग छलफलसमेत भइरहेको जनाइएको छ । सात नम्बर प्रदेशबाट तत्कालिन एमालेबाट मन्त्री नपरेको भन्दै विरोध भइरहेका बेला यस पटक मन्त्री दिन सक्ने र त्यसका लागि रानाको नै सम्भावना देखिएको बुझिएको छ ।
सांसद राना स्रोतकाअनुसार उनी मन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ । पार्टीमा कानूनसंग सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै कानून मन्त्री बनाउने कुरा उठिरहेको छ । सात नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले रानालार्इ नै मन्त्री बनाउन बलिङ गरिरहेका छन् ।